Mratt's Thoughts | What I love and How I think
~ What I love and How I think
Posted by Mratt in ကဗျာ, အတွေးအမြင်
ပြာရှရှအလင်းရဲ့ နီညိုရောင် ကတ္တီပါစအောက်
ကိုယ့်တံဆိပ်ကိုယ် တိတ်တဆိတ် ခပ်နှိပ်ကြ
ကိုယ့် ဗားရှင်း* ကိုယ်မှ မမြှင့်နိုင်ရင်
နေကမ္ဘာရဲ့ လည်ပတ်မှု ဆိုတာ
ဖုန်းတလုံး ဝယ်ထားပါ ပြီးရင်
ဗီလိန်တွေမှာ ဗီလိန်ဖြစ်ရတာကို နှစ်သက်တဲ့
ရက်စက်စက် ခံစားချက်တမျိုး ရှိကြတယ်
ဒီစကားကို သဘောကျတယ် မဟုတ်လား
မင်းသားနေရာက ခင်ဗျားပဲ သရုပ်ဆောင်ပါ။
(၁၇၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၆)
အချီကြီးမိပြီလို့ကြံပြီး ဝယ်စုခဲ့တာတွေ အချီကြီးပုပ်သိုးသွားမယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ကြ မိတ်ဆွေဆိုတာမျိုးက သင်္ဘောဆေးပေမနေတဲ့ လက်ကိုမှ ဆွဲ… နှုတ်ဆက်ချင်ကြတာမလား ငှားထားတဲ့အိမ်ကလေး အလှဆင်နေတုန်းမှာပဲ နောက်ထပ်အိမ်ငှားခတွေ အကျည်းတန်ဆဲပေါ့ ဘဝမှာ ရောင်းကုန်တွေကို တန်ဖိုးထားမိမှန်းမသိခင် မြတ်နိုးရတဲ့အရာတွေက ဈေးတွေလျှောလျှောကျ ဘယ်အရာက စွန့်လွှတ်ဖို့ …
ပိုင်စိုးဝေ ဆိုတာ အဖိုးကြီး…ပဲ
တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တုန်းက ‘သိန်းစွန်ငှက်အပြန်လမ်း’ ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ဖတ်ရတယ်။ ကျနော့်ဇာတိ သံတွဲမြို့ကနေ ရန်ကုန်က ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ လာတက်ရတော့ အမေနဲ့ရွာဆိုတာ အဝေးက လွမ်းရတဲ့ ခမ်းနားမှုတခုပေါ့။ ပိုင်စိုးဝေရဲ့ သိန်းစွန်ငှက် ကဗျာထဲက… “ကျနော်ကတော့ နွေဦးရက်တွေအကြောင်း သီချင်းမဆိုနိုင်တဲ့ ဥသြငှက်တကောင်ရဲ့ …
ကျနော် တောက်လျှောက် သိမိ၊ လေ့လာကြည့်မိသလောက်၊ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာပြီး သတင်းအလုပ်လုပ်နေသူတွေ သတင်းလိုက်တာမှာ ပရော့ဂျက်တွေပါ ပူးတွဲရှာပြီး လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်သတင်းတိုက်က ရခိုင်မှာ သတင်းယူခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီသတင်းသမားက ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ …
သူ့ကို ဂစ်တာတီး သင်ပေးမယ် (လက်ကလေးတွေနာလာရင် ဥုံဖွ) ကြိုက်တဲ့သီချင်း အပြန်အလှန် တီးခတ်ကြမယ် ကြိုက်တဲ့တက်တူး နှစ်ယောက်တူ တံဆိပ်ခတ်မယ် ကျနော်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ သူ့အခန်းထဲက မော်လမြိုင်ဒူးရင်းသီးတွေ သူ နည်းနည်းလေးတောင် မစပ်စုတဲ့ ကျနော့်အခန်းထဲက ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေ သူနဲ့ …
ခေတ်ရဲ့အစာ ဟာ သတင်းဖြစ်လာသလား
နေ့စဉ်သတင်းတွေဟာ နာမည်ကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာလား? ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်တဲ့ ခေတ်ရဲ့အစာ ကတစ်ဆင့် သတင်းဆိုတာ ဖြစ်လာတာလား? ဒီသတင်းတွေဟာ လူတွေဆီတိုက်ရိုက်ရောက်နေတာလား? ဒါမှမဟုတ် သတင်းခန်းတွေက သတင်းဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုပြီးမှ စာဖတ်သူဆီ ရောက်တာလား? ဒီနေရာမှာ ခေတ်ရဲ့အစာ ဆိုတာ (Trend) ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေအရ …
၂၅ နှစ်တာ နေ့လည်စာ
‘အဆင်ပြေလား’ လို့ ဆင်တစ်ကောင်ကို အမေးခံရတယ် နို့ဆီခွက်ထဲ ခလောက်သံတွေ ဒင်းတို့မှ မကြားပဲ အစွယ်ငေါငေါ ငြိနေသံတွေ။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာ လူလူသူသူ တိုက်ခန်းတစ်လစာမှာ အလယ်လတ်တန်းစား နေ့လည်စာမှာ ၁၁ ပေ၊ ပေ ၄၀ မှာ …
သူ နမ်းလိုက်တဲ့ ပန်းရနံ့မှာ ကျနော့် ညနေခင်းပေါင်းများစွာ ပါသွားသလိုမျိုး…။ အသံတွေမှာသာ အရောင်ပါရင် အဲ့ဒါ အပြာရောင်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် ကလေးလေး…ရေ။ ပါးပေါ်က မရဲတရဲ ထွက်ချင်နေတဲ့ ဝက်ခြံလေးကို ငေးကြည့်ရင်း ချစ်ခြင်း ကောက်ကြောင်းဟာ အလိုက်မသိစွာပဲ …
ခုလောက်ဆို ပန်းစည်းလေး ညှိုးခြောက်ရော့ပေါ့ သဘာဝ အစစ်မှာ လစ်မစ်ရှိခဲ့လေသလား…။ သူ့ဆံစမှာ ရနံ့လှခဲ့ ပစ်ရန်ရွယ်ကိုး သူငြိုးထားလည်း တစ်ပွင့် ပွင့် စီ၊ ခြယ်သ ညီသည် သူ့ဆံပင်မှာ နှင်းဆီ လွင့်လွင့်။ သို့ပါသော်လင့်.. ခွင့်မြွတ်ခြွေကြား …
သစ္စာတရားဟာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရလွယ်သလောက် သူ့ချည်းသက်သက် ဘယ်တော့မှ လိုရင်းမရောက်နိုင်ခဲ့။ ပန်းတိုင်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း သွားရတာလား နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ အထမြောက်တာလား အလွမ်းအယောင်ပြ အာသာဖြေခြင်းလား ‘ကွန်ဒုံး’ တစ်ထုပ်လောက်ပေးပါ ဒီနေရာမှာ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ပါးချခံရတယ်။ သိမ်းထားခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်တွင်းနက်နက်တွေ အမွေးအမြှင်မရှိတဲ့ …